Wararka Suuqa Maanta: Go’anka Manchester United ee Paul Pogba, Antonio Rudiger oo ku jira Liiska Liverpool ee Suuqa iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Go’anka Manchester United ee Paul Pogba, Antonio Rudiger oo...
Wararka Suuqa Maanta: Go’anka Manchester United ee Paul Pogba, Antonio Rudiger oo ku jira Liiska Liverpool ee Suuqa iyo Qodobo kale
Manchester United ayaan iibin doonin Paul Pogba bisha Janaayo waxayna si buuxda ugu diyaar garoobeen in 28-sano jirkaan khadka dhexe ee France uu si bilaash ah uga tago dhamaadka xilli ciyaareedkan marka uu qandaraaskiisu dhaco. (Telegraph)
Tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa ah bedelka suurtagalka ah ee Ole Gunnar Solskjaer oo ah tababaraha Manchester United . (ESPN)
Liverpool ayaa dooneysa weeraryahanka Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, inuu ogolaado qandaraas cusub ka hor inta uusan furmin suuqa kala iibsiga ee Janaayo. (FootballInsider)
Weeraryahanka Manchester United Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, ayaa doonaya inuu weli u ciyaaro Portugal Koobka Adduunka 2026. (Thesun)
Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa u ogolaan doona weeraryahanka Belgium Eden Hazard, oo 30 jir ah, inuu ka tago kooxda hadii uu doonayo inuu baxo. (Marca)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa aaminsan in halyeeyga Barcelona Xavi uu diyaar u yahay inuu qabto shaqada kooxda reer Spain, isagoo sheegay in saaxiibkiisii ​​hore uu leeyahay khibrad maamul oo ka badan intii uu soo maray markii uu shaqada qabtay, Xavi ayaa isku dayi doona inuu ka dhigo garabka Bayern Munich iyo France Kingsley Coman, oo 25 jir Saxiixiisa ugu horeeya.. (Goal)
Tababaraha reer Spain ee Arsenal Mikel Arteta – ciyaaryahankii hore ee da’yarta Barcelona – ayaa iska diiday inuu u tartamo shaqada tababaraha Barcelona ee bannaan. (Sky Sports)
Newcastle ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga Manchester United Jesse Lingard. 29 jirkaan khadka dhexe uga ciyaara England ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo St James Park bisha Janaayo. (Thesun)
Daafaca kooxda Chelsea Antonio Rudiger ayaa lala xiriirinayaa kooxda Liverpool . 28-sano jirkaan daafaca uga ciyaara Jarmalka ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga soo aadan, welina ma uusan saxiixin heshiis cusub kooxda. (Express)
Goolhayaha Aston Villa iyo Argentina Emiliano Martinez, oo 29 jir ah, ayaa hogaaminaya liiska ay Tottenham dooneyso hadii 34 jirka reer France Hugo Lloris uu baxo xagaaga soo aadan. (independent)
Daaficii hore ee England iyo kabtanka Chelsea John Terry ayaa ku tartamaya inuu noqdo tababaraha xiga ee Newcastle United . Waxay noqon doontaa 40-jirkan jagada ugu horreysa ee maamul. (Mirror)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in daafaca reer France William Saliba, 20, uu u dagaalami karo boos ka mid ah kooxda Gunners marka uu ka soo laabto amaahda uu ku joogo Marseille xilli ciyaareedka soo socda. (Goal)
Tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa ku tilmaamay xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium Youri Tielemans “mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee ugu fiican Yurub” iyadoo lala xiriirinayo 24-sano jirkaan Manchester United, Liverpool iyo Bayern Munich . (Mirror)
Daafaca Napoli iyo Senegal Kalidou Koulibaly, oo 30 jir ah, ayaa sheegay inuu ka tagi doono kooxda oo kaliya seddex kooxood oo adduunka ah – Manchester City, Real Madrid ama Barcelona. (Sportwitness)
Weeraryahanka Argentina Lautaro Martinez – 24-sano jir ayaa laga doonayaa Manchester City – lakin waxa uu qarka u saaran inuu qandaraas cusub inuu saxiixo Inter Milan. (Manchester Evening News)
Tababaraha Crystal Palace Patrick Vieira ayaa sheegay in ay tahay “farxad” in uu la shaqeeyo 21 jirka khadka dhexe ee Ingariiska Conor Gallagher, amaah uga yimid Chelsea, laakiin wuxuu sheegay in ay goor hore tahay in laga hadlo heshiis rasmi ah. (Iindependent)
Tababaraha ku meel gaadhka ah ee Newcastle United Graeme Jones ayaa soo jeediyay in loo dammaanad qaadayo inuu noqon doono ugu yaraan kaaliyaha tababaraha kooxda mustaqbalka – iyadoo aan loo eegin qofka loo magacaabayo tababaraha kooxda. (Chronicleline)
Arsenal ayaa xiiseyneysa saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara Club Bruges iyo Netherlands Noa Lang, oo 22 jir ah, waxaana ay farxad ka heshay Borussia Monchengladbach oo soo afjartay xiisahooda ciyaaryahanka. (Football.London)
Manchester United ayaa isha ku haysa 18 jirka daafaca uga ciyaara Real Madrid ee Marvelous Antolin Garzon. Xidiga Isbaanishka ayaa ka iftiimaya mustaqbalka Spain. (Bernabeu Digital)
Previous articleDENI oo ka hadlay arrimo xasaasi ah – Muxuu ka yiri doorashada Soomaaliya?
Next articleAl-Sadd oo ka jawaabtay wararka xanta ah ee Xavi lala xiriirinayo Barcelona
Qaahira (Caasimada Online) – Shirka Baarlamaanka Carabta oo lagu soo gaba-gabeeyey magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladda...